Kylie Jenner waxay noqotay bilyaneerka ugu yar ee iskeed isu sameystay taariikhda iyadoo 21 jir ah
Liiska ugu dambeeya ee bilyaneerada ay soo saartay Forbes, dadku waxay layaab ku noqotay markii ay ogaadeen in Kylie Jenner oo 21 jir ah ay noqotay bilyaneerkii ugu da'da yaraa ee taariikhda iskiis u sameeya iyadoo hantideeda ay gaareyso $ 1 bilyan oo ka mid ah waxyaabaha ay isku qurxiyaan ee Kylie. Markan, Kylie Jenner waxay jabisay aasaasaha Facebook Mark Zuc ...
Sida loo nadiifiyo burushka qurxinta
Burushka qurxinta dumarka waa in si joogto ah loo nadiifiyaa si looga hortago koritaanka bakteeriyada. Marka sidee loo nadiifiyaa burushka la isku qurxiyo? Waxaa jira laba dariiqo oo lagu nadiifiyo buraashka qurxinta, mid waa dhaqidda budada, midna waa biyo maydhashada. Nadiifinta budada / Talcum qallaji Nadiifi burushka budada ee budada aan ...
Waxaa jira 4 qaab oo loo sawiro hooska indhaha. Way fiicantahay in la sawiro iyadoo loo eegayo nooca isha.
Ujeedada aasaasiga ah ee is-qurxinta waa in si buuxda looga faa'iideysto faa'iidooyinka lagana fogaado qasaarooyinka, iyo in wax laga beddelo yaraanta wejiga cad ee qofka. Tusaale ahaan, qurxinta indhaha, in kasta oo aagga guud uusan ballaaranayn, laakiin isticmaalka midabka qurxinta waa wax badan. Waxaad soo jiidan kartaa isha dabiiciga ah iyo quruxda badan ...
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Farjiga Midabka Dibnaha, Lipstick yar, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Liimiga Shimmer, Lipstick shukulaatada, Dhammaan Alaabooyinka